Dị ka anyị si mara, granules ọgwụ ọdịnala China nwere abaghị uru ọ bụla nke ihe ndị dị irè, arụmọrụ dị elu yana oriri ike dị ala mgbe emechara ya site na granulator akọrọ. Mana n'iji ya eme ihe, enwere nsogbu dị iche iche. Otu esi edozi nsogbu ndị a kwa ụbọchị ...
Ngwa nke akụrụngwa granulation n'ọhịa nke ọgwụ ọdịnala China
The technology nke akọrọ granulation igwe nwere ike dechara site ala ala ewepụghị nsogbu granulator. A na -eji teknụzụ ọhụrụ nke njikwa ala na akụrụngwa. Ngwa njikwa ya nwere ike ịhazigharị mgbanwe nke ihe anụ ahụ ọ bụla n'etiti ihe dị iche iche na ọkwa dị iche iche nke otu mat ...
Ihe akọrọ granulator bụ usoro izizi ọhụụ ewepụtara ka emechara ka “usoro izizi otu ụzọ” nke usoro mkpofu nke ọgbọ nke abụọ. Ọ bụ usoro mmachi gburugburu ebe obibi na akụrụngwa ọhụrụ maka ịpị ntụ ntụ ozugbo n'ime nsogbu. Akọrọ granulator ọtụtụ -eji na ahịa ...